C/raxmaan Faroole oo ugu baaqay Mas’uuliyiinta Kismaayo inay dhisaan maamul lagu qanciyo Dowladda – idalenews.com
C/raxmaan Sheikh Maxamed Faroole, Madaxweynaha maamulka Puntland, ayaa waxa uu baaq u diray Shacbiga ka soo jeeda Magaaladda Kismaayo ee uu ku sheegay inay yihiin kuwa ku jahwareersan dhismaha Maamulka Cusub.
C/raxmaan Sheikh Maxamed Faroole, ayaa shacabka iyo masuuliyiinta ku howlan dhismaha maamulka Jubbaland ku bogaadiyay inay siiwadaan dhismaha maamulkooda, waxa uuna sheegay in Shacab uusan noolaan Karin Maamul la’aan iyo kala dambeyn la’aan, sida uu hadalka u dhigay.
C/raxmaan Sheikh Maxamed Faroole, waxa uu amaanay sida Mas’uuliyiinta ka soo Jeeda Gobalada Jubbooyinka ugu howlan yihiin Dhismaha Maamul Cusub, waxa uuna sheegay inay mudan tahay inay xoojiyaan dhanka amaanka iyo qodobadda Dastuurka.
Mar uu soo hadal qaaday hadii uu jiro khilaaf ka dhextaagan maamulka Jubbaland iyo Dowladda Soomaaliya ayaa wuxuu ku taliyay in la xaliyo khilaafkaasi,isaga oo sheegay in Dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay aqoonsato maamulkaasi Jubbaland,maadaama aan lakala maarmin oo aan lakala go’ikarin.
Si kastaba ha ahaatee, C/raxmaan Sheikh Maxamed Faroole, ayaa Xukuumadda Somalia ugu baaqay inay fududeyso qanuunada ku aadan dhismaha Maamulada Dalka, waxa uuna sheegay in lagu jiro xilli xun loona baahan yahay in wax yaabo badan laga tanaasulo, sida uu hadalka u dhigay.
(DAAWO SAWIRADDA). Qarax Gilgilay Magaaladda Boston ee Dalka Maraykanka